कुकुरले किन खुला ठाउँमा से’क्स गर्छ? यस्तो पो रहेछ कारण ! - ramechhapkhabar.com
जब पाँच जना पतिमध्ये कुनै पनि भाइ द्रौपदीको श यन कक्षमा हुदा बाहिर ढोकामा खराउ छोडिएका हुन्थे । यसरी खराउ देखेपछि अर्को भाइ खोपिमा पस्दैन थिए । एक दिन माहिला भीम द्रौपदीको श यन कक्षमा विराजमान थिए ।
सदा झैं भीमले आफ्ना खराउ प्रवेश द्धारमै छोडेर भित्र द्रौपदीसँग प्रेमलि लामा मग्न भइरहेका बेला अचानक सा हिँला भाइ अर्जुन प्रवेश गर्न पुग्छन् । यो क्ष ण द्रौपदी, अर्जुन र भीम तीनै जनाको निम्ति श र्म नाक बन्न पुग्छ ।
यो सुनेर सबैजना अलमल्ल पर्दछन् र तिनै जना भीमका खराउ खोज्न बनबिहारमा निस्कन्छन् । निकै पर एउटा कु कुर भीमका खराउसँग खेलिरहेको देखेर क्रो धित बनेकी द्रौपदीले श्रा प दिँदै भनिन्, ‘यस
कुकुुरका कारण मैले यौ नक्रि डा गरेको आज अ र्को पतिले देखेर जुन श र्म मैले सहनु प¥यो । सो ही दृष्य दुनियाँले दे खुन् र म जस्तै हि नताबोध र ला जले गुज्रिनु परोस् ।’ त्यस यता कुकुरहरु खुल्लामै यौ न क्रि’डा गरिरहेका हुन्छन् भन्ने क था छ ।